ရွှေလုပ်သား: "၂၀၁၇ ခုနှစ် MAT အဖွဲ့ လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးစါရင်း ထုတ်ပြန်ချက်"
"၂၀၁၇ ခုနှစ် MAT အဖွဲ့ လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးစါရင်း ထုတ်ပြန်ချက်"
MAT အဖွဲ့သည် ထိုင်းအစိုးရလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးအထူးရဲတပ်အဖွဲ့ Anti-Human Trafficking Division (AHTD) ထိုင်းအစိုးရလူကုန်ကူးမှုစင်တာ Anti-Human Trafficking Center(DSI) တို့နှင့်ပူးပေါင်း၍ ၂၀၁၁ ခုနှစ် တွင်လူကုန်ကူးခံရသူပေါင်း ၅၀ဦးကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီး လူကုန်ကူးသူ ၂ဦးကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ခြင်းအကြိမ်၂၀တွင် ၂၉၂ဦးကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီး လူကုန်ကူးသူပေါင်း၉ဦးကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း လူကုန်ကူးမှု ၄၂ကြိမ် နှိမ်နင်းမှုတွင် လူကုန်ကူးခံရသူပေါင်း ၂၆၄ဦးကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီး လူကုန် ကူးသူပေါင်း ၂၃ ဦးကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း လူကုန်ကူးမှု၂၈ကြိမ်နှိမ်နင်းကြရာတွင် လူကုန်ကူးခံရ သူပေါင်း ၁၂၀ဦးကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီးလူကုန်ကူးသူပေါင်း ၁၀ဦးကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်း လူကုန်ကူး မှု၂၆ကြိမ်နှိမ်နင်းမှုတွင် လူကုန်ကူးခံရသူပေါင်း၂၆၅ ဦးတို့အား ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီး လူကုန်ကူးသူပေါင်း ၁၉ဦးကိုဖမ်းဆီး နိုင်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်းလူကုန်ကူးမှု ၂၇ကြိမ် နှိမ်နင်းရာတွင် လူကုန်ကူးခံရသူပေါင်း ၃၄၇ ဦးကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီးလူ ကုန်ကူးသူ၉ဦးကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ခြင်းကြောင့် နိုင်ငံခြား သားများနှင့်အတူ DSI မှချီးမြှင့်သည့် DSI Model Network ဆုကို မြန်မာသံရုံးနှင့်အတူ ပထမအကြိမ်အဖြစ် ရရှိခဲ့ပါ သည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ဇူလိုင်လအထိ လူကုန်ကူးမှုနှိမ်နင်းခြင်း ၁၀ ကြိမ်တွင် လိင်အလုပ်သမများအပါအ၀င် စုစုပေါင်း ၁၁၂ ဦးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီး လူကုန်ကူးသူပေါင်း ၈ ဦးကို ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါသည်။
ယခုနှစ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများအဖွဲ့ MAT သည် မသမာသူတို့၏ ချောက်တွန်းမှု နှင့် အန္တရာယ်ပြုခြင်းတို့ကို နည်းပေါင်းစုံ အကြိမ်ကြိမ်ခံခဲ့ရသဖြင့်လုံခြုံရေးအလွန် အားနည်းခဲ့ရပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ယခင်နှစ်များကကဲ့သို့ အင်တိုက်အားတိုက် မလုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့ကြ တော့ပဲ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှု လျှော့နည်းခဲ့ရပါသည်။
ကျွန်ုပ်အခက်အခဲများစွာကြံခဲ့ကြရသော်လည်း ရနိုင်သမျှ ကြိုးပမ်း၍ စဉ်ဆက်မပြတ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေခဲ့ သည့်အတွက် ထိုင်းအစိုးရလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေး Anti-Human Trafficking Center- Department of Special Investigation (DSI) မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ဂုဏ်ပြုလက်ဆောင်တစ်ကြိမ်နှင့် DSI Model Network ဆုတံ ဆိပ်ကို ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ်ရရှိခဲ့ပါသည်။
MAT အဖွဲ့သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်ထူထောင်၍ ထိုင်းရောက် အလုပ်သမားအရေးကိစ္စများကို တတ်စွမ်းသမျှကူညီဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ငါးဖမ်းလှေများပေါ်မှ ထောင်ချီရှိသည့် လူကုန်ကူးခံရသူများ၊ ရောင်းစားခံထားရသည့် ရာချီသည့်မြန်မာပြည့်တန်ဆာများစွာတို့ကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံတွင် လူကုန်ကူးမှုမှာလျှော့နည်းသွားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ထိုင်းငါးဖမ်းလှေများ၊ ပင်လယ်အစားအစာ ထုတ်လုပ်သည့်နေရာများ၊ နယ်စွန်နယ်ဖျား မွေးမြူရေးနှင့် ကွန်ပေါင်းစက်ရုံများအပြင် အိမ်ဖေါ်များစွာတို့လည်း လူကုန်ကူးခံနေရဆဲဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း တရားဝင်ဖွဲ့စည်းထူထောင်ခွင့်ရရှိသည့်အဖွဲ့မဟုတ် ပါ။ သို့ဖြစ်၍ ထိုင်းနှင့်မြန်မာအစိုးရတို့၏ ကူညီစောင့်ရှောက်မှု အလျှော့အတင်းအပေါ်တွင်သာအဓိကမူတည်ပါသည်။
In the year of 2011, MAT saved 50 victims of human trafficking and arrested two traffickers by giving closer collaboration with Thai Anti-Human Trafficking Division (AHTD) and Anti-Human Trafficking Center (DSI). In the year of 2012, it rescued 292 human trafficking victims and arrested9traffickers as 20th times operations of Anti-Human Trafficking events. In the following year, MAT crack downed 42nd times operations and 264 victims were saved by MAT in the year of 2013 during that operation. In 2014, MAT rescued 120 victims of human trafficking and arrested 10 traffickers in 2014.
MAT conducted 26th operations event of Anti-Human Trafficking and saved 265 victims of human trafficking and arrested 19 traffickers in 2015. MAT implemented 27th operations, it saved 347 victims of the human trafficking and arrested9traffickers in 2016. As result of its hardworking, MAT received the DSI Model Network award which is honored by DSI together with Myanmar Embassy in Thailand and other foreigners who are working in Anti-Human Trafficking in 2016 as the first time. As of July in 2017, MAT saved 112 victims of human trafficking which included 10 prostitutes as 10th operation outreach of Anti-Human Trafficking and arrested 8 traffickers.
In this year, members of MAT and its staff working for Anti- Human Trafficking and helping vulnerable migrants have been threatening by people who commit abuses and people who do illegal things by different ways and deal with security issues of people work for MAT. Therefore, the situation makes MAT unable to conduct and prevent its Anti-Human Trafficking activities as the previous years due to the threats and obstacles. But MAT tries the best in the prevention of human Trafficking even though it has some obstacles and difficulties.
Asaresult, MAT re-received the DSI Model Network award from the Anti-Human Trafficking Center-Department of Special Investigation (DSI) as the 2nd times in 2017. MAT established in 2008 in order to be able to assist migrants who are working in Thailand. MAT is able to save thousands of victims of human trafficking from fishing boats and hundreds of prostitutes who were trafficked in the prostitution.
Currently, the number of trafficking cases or level of trafficking cases are not decreased yet in Thailand. People are being trafficked to the fishing boats, seafood production factories, agricultural sectors and work as domestic helpers in Thailand. MAT is not registered organization in Thailand legally and MAT mainly relies on the kind supports and care of Thai and Myanmar government.
Mr. Kyaw Thaung
Myanmar Association in Thailand (MAT)
စာရေးသူ Unknown အချိန် 19:00